Soo-saaraha dareeraha heerkulka Shiinaha
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka
dareeraha heerkulka ayaa isticmaalaya beddelka caabbinta marka heer kulka maaddada iyo korka loo cabbiro heerkulka. dareeraha heerkulka wuxuu si ballaaran ugu isticmaalaa batroolka, kiimikada, mashiinada, metallurgy, korantada, dharka, cuntada iyo qeybaha kale ee warshadaha iyo tignoolajiyada sayniska.
ku soo dhowow inaad la xiriirto testeck, diirada saar diiradda saaraha dareeraha heerkulka muddo 17 sano ah. waxaan kuu habeyn karnaa shuruudahaaga.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Dareeraha heerkulka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Dareeraha heerkulka kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.